February 2019 - Page 3 of 3 - Vernac News
Ekapa – Inqununu yeDyunivesithi yaseKapa uNjingalwazi Mamokgethi Phakeng uthi wothukile emva kokugrogiswa ngentseni yanamhlanje ngumntu angamchazanga. UNjingalwazi Phakeng ubhale lomyalezo kwikhasi uTwitter ngentseni yangoLwesibini: “Intliziyo yam ibethela uphuma, ndiyabila ngumsindo emva kokugrogriswa ngumntu ngalentseni xeshana ndisuka kwinqwelo yam ndisingise e-ofisini. Andizokuchitha imali ye-UCT ngokuzifunela umqhubi okanye unogada. Qhubeka wenze lento ufuna ukuyenza. NIQAPHELE: Ayingomntu mhlophe” […]